Ihe anyị na - eme - Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd.
anyị na-enye ndị ahịa anyị kacha mma na eCommerce iji mezuo site na China ruo na Worldwide…
Mmezu bụ ihe karịrị iwu mbufe nye ndị ahịa gị. Ọ bụ maka imepụta ahụmịhe izizi klaasị nke na-ahapụ mmetụta na-adịgide adịgide, nke na-eme ka ndị ahịa gị na-abịaghachi ịtụ ahịa ugboro ugboro. Nke ahụ bụ ebe anyị nwere ike inye aka!
Ahụmahụ:Anyị nwere ahụmịhe ntọala ntọala dị mkpa maka mmezu gị kachasị na ntuziaka B2B na B2C. Anyị maara omume kachasị mma na mpaghara a nke nwere ike ịbara gị uru. Anyị nwere usoro arụmọrụ dị mma, akụrụngwa, na ndị ọrụ a zụrụ nke ọma iji jikwaa ya n'enweghị nsogbu, n'ụzọ dị irè na n'ụzọ kachasị mma. Facilitieslọ ọrụ anyị bụ nke kachasị elu yana nlekọta kacha mma enwere ike iji nlele oge, njikwa njikwa na nyocha. A zụrụ ndị ọrụ anyị nke ọma ịkwado ụkpụrụ ndị a n'oge niile.
Sistemụ:Anyị na-enye ihe ọnụ na-eri-irè ngwọta iburu irè oge management n'uche. Site n’inwe usoro na ọrụ anyị gburugburu azụmahịa gị, anyị nwere ike ịchekwa gị oge, ego na ihe niile ga-edozi n’enweghị nsogbu na enweghị nsogbu. Ezubere usoro ụlọ anyị maka ndị ahịa ma ọ dị mfe ma bụrụ nke na-enweghị nghọta maka ụgbọ mmiri na-ere n'ịntanetị, na-enye gị ohere ijikwa ngwa ahịa nke onwe gị ma nye iwu nke ọma. Nwere ike inyocha ngwaahịa gị mgbe niile n’ebe ọ bụla, oge ọ bụla, n’enweghị nsogbu ọ bụla ị gabigara. Sunson si interface na-arụ ọrụ websaịtị jikọtara ọnụ yana ọrụ nchịkọta-na-mkpọchi azụ anyị. Anyị na-eji teknụzụ barcode na ọkwa ọ bụla.
Nchekwa:Anyị nwere ụlọ nkwakọba ihe karịrị sq mita 10,000 na Shenzhen na Guangzhou nke mpaghara Guangdong, na China. A na-echekwa ngwaahịa na usoro nhazi. Anyị na iji ụlọ nkwakọba ihe na-arụ ọrụ nke ọma na-enyere aka ịkwado njikwa. A na-edebe ihe dị oke ọnụ iche iche. Lọ nkwakọba ihe anyị nwekwara usoro mgbochi ọkụ yana nyocha 24 elekere. Anyị nwekwara ohere ijikwa iji hụ nchekwa nke ngwaahịa gị.
AKWAREKWỌ:Warelọ nkwakọba ihe anyị na China na-enye gị ohere irite uru nke ụgwọ ọrụ dị ala na ọtụtụ nhọrọ nnyefe. A ga - enwekwa uru dị ka mbelata ụtụ isi maka ire ahịa yana izere ọrụ. Anyị nwekwara ike inye aka iji kpọtụrụ ndị na-eweta ngwaahịa ndị China gị.
Nhọrọ-na-Pack:Anyị na-ejikwa iwu 30,000+ kwa ụbọchị yana ikike maka 100,000+ iwu n'oge oge kachasị elu. Anyị nwere oge ịgbanye ọsọ ọsọ. N'ozuzu, iwu ndị edobere n'etiti 10: 00 - 20: 00 dị njikere maka nchịkọta site na onye na-ebufe n'ime awa 24. Anyị na eburu-na-mkpọ na-eji usoro izizi mbụ, yabụ ndị ahịa gị nwere nkwa iji nweta ngwaahịa ha n'ọnọdụ kachasị mma. Anyị na-enye n'efu ihe na-ejuputa ihe maka nchekwa ọzọ na mmebi n'oge mbupu mba ụwa. Anyị na-eji teknụzụ barcode na ọkwa ọ bụla. A na-atụle ngwugwu na-akpaghị aka iji hụ na izi ezi nke ebubo mbupu. N'ezie, teknụzụ bụ isi anyị n'ibelata ụgwọ, meziwanye arụmọrụ ma belata njehie mmadụ.
Mbupu:A na-ahazi nchịkọta site na iji igwe anyị ma na-enyocha ya ugboro abụọ tupu ebupu ya. Ihe omuma anyi banyere mbupu mba uwa n’enyere anyi aka izoputa gi ego na oge. Ga-enwe nhọrọ nnyefe kachasị akụnụba dịnụ n'ihi na sunson abụwo ndị mmekọ na ndị na-ebu ụzọ na-eduga ụwa dịka UPS, DHL, EMS, wdg yana ọrụ nzipu ozi mba ụwa dị ka Netherlands Post, Hong Kong Post, China Post, USPS, Switzerland Post , Royal Mail, Belgium Post, wdg Anyị nwekwara ọrụ ntinye aka, nke jikọtara ya na ndị ozi Europe ka ha lekọta nnyefe ikpeazụ nke ikpeazụ. Jiri ohere ụgbọ mmiri anyị dị ala nke anyị na ndị ahịa a tụkwasịrị obi kwurịtara! Ọ bụrụ na ị nọ na mpụga nke China ma ị na-ere ngwaahịa ndị emere na China na ahịa ụwa, mgbe ahụ anyị nwere ike inyere gị aka site na mbupu iwu ozugbo na China nye ndị ahịa gị ebe ọ bụla gburugburu ụwa.
Ahịa:Sunson nwere nnukwu ahụmịhe ọrụ na ndị ahịa si mba ọzọ ndị ngwaahịa ha sitere na China. Dị ka anyị si mara, ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa n'ịntanetị bụ ndị si mba ọzọ; anyị emepeela ụdị azụmaahịa pụrụ iche nke na-anabata ndị ahịa anyị niile na-enye ha ohere ijikwa ihe niile n'ịntanetị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ mmezu nke na-eme doveta gị n’ụgbọ ahịa e-commerce n’enweghị nsogbu, mgbe ahụ anyị nwere ike ịgwa gị okwu iji kwalite usoro ahụ site na ntinye API. Anyị ga-eme ka ọ dị mfe iji ụlọ ahịa esenidụt na-arụ ụlọ nkwakọba ihe China.
Nkwado:Anyị nwere ndị njikwa Akaụntụ na-asụ Bekee; Ndị Ahịa Nnọchite Ndị Ahịa nke a na-ekenye ndị ahịa ọ bụla edebanyere aha ha ka ha nyere gị aka.
Ọrụ mmezu ị ga - enwe ebe a, sunson ga - aza ajụjụ ma gosipụta na nkwa anyị niile. Can nwere ike iwepu oge ejiri rụọ ọrụ, ọzụzụ na ilekọta ndị ọrụ ụgbọ mmiri ma ọ bụrụ na ijikọ anyị. Ime ya n'onwe gi adighi nfe, anyi biara gi. Anyị na-eme ya maka gị, nchekwa na n'usoro oge. Ihe na-echegbu gị adịghịzi. Ebe mmezu anyị bụ ihe ịchọrọ iji zụọ ahịa gị na ọkwa ọzọ, ụwa na-ekwe nkwa.
Anyị na-agba gị ume ịkwọ ụgbọ ahịa na anyị ga-ejikwa nkwakọ ngwaahịa, mbupu maka gị. Just na-elekwasị anya na ihe ị kacha mma. Ọrụ mmezu ị ga-enweta site na sunson dị mma, na-aza ajụjụ ma gosipụta nke ọma. Ga-ewepụ oge ejiri ego, ọzụzụ na ilekọta ndị ọrụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ime ya n'onwe gị dịkwa oke ike. Ebe mmezu anyị bụ ihe ịchọrọ iji zụọ ahịa gị na ọkwa ọzọ.